မဗဒေါရဲ့ ဗဒေါလမျး: နှစ်ချုပ်စာရင်း နှင့် နှစ်သစ်ဆုတောင်း
Posted by mabaydar at 4:46 AM
အင်း...၂၀၀၈ ကပြန်ပြီတွေကြည့်လို့ တောင်မကောင်းတဲ့နှစ်ပါ။ကောင်းတာဆိုလို့နဲနဲပဲရှိတယ်။
1/05/2009 5:49 AM
ဟုတ်ပါ့ဗျာ ၂၀၀၈ ကို အတော်တောင် အမြင်ကပ်တယ်...
၂၀၀၉ ရဲ့ နေ့ရက်တွေတိုင်းမှာ ပျော်ရွှင်စွာ အဆင်ပြေပါစေလို့ ဆုတောင်းပါတယ်...
အမရေ ၂၀၀၈ မှာတော့ ဒုက္ခအတိနဲ့ ဖြတ်သန်းခဲ့ကြရပါတယ် လာမဲ့ ၂၀၀၉ မှာတော့ လူသားအားလုံး အဆင်ပြေ ချောမွေ့ပြီး သာယာတဲ့ ၊ ကောင်းခြင်းများ ပြည့်စုံတဲ့ လမ်းလေးကို ဖြတ်သန်းနိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးပါတယ်
ပန်းပန်းလျှက်ပေါ့ ဗေဒါရ.. ၂၀၀၉မှာ နင်ကံကောင်းပါစေ သယ်ရင်း...။
ဟုတ်ပါ့ မဗေဒါရေ့ တကယ်ပဲ စိတ်ကုန်စရာ 2008 ပါပဲ ဒီပို့စ်ဖတ်ပြီးမှ ပိုသတိထားမိတော့ပိုဆိုးး ။ အဆင်ပြေမယ့် 2009 လေးဖြစ်ပါစေဗျာ ။
2009 ကတော့ စကတည်းက ရင်လေးစရာ။ :( ဘာဖြစ်မယ်မှန်း အခုထိမရေရာသေးဘူး။
"Never Give Up ... Never Give Up" ... like The Spirit Cartoon.
I wish you will be definitely happy and lucky in 2009.
ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ရေးစရာလေးတွေလည်း ရေးပါနော်။ အမြဲတမ်းပဲ လေးနက်နေရတော့လည်း ဘ၀က လေးလံပါတယ်လေ။
၂၀၀၉ လဲကောင်းပါစေ ၂၀၁၀ မှာ ပိုကောင်းနိုင်ပါစေ လို့ဆုတောင်းပါတယ်..။
ကံမကောင်ခြင်းတွေပြီးသွားရင် ကံကောင်ခြင်းလက်ဆောင်တွေ ရလာတော့မှာပါ..
အင်း.. မဗေဒါပြောသလိုပါပဲ ၂၀၀၈ ကတော့။ ၂၀၀၉ ကတော့ ဘယ်လိုလာမလဲမသိပါဘူး။ ကောင်းပါစေလို့ပဲ မျှော်လင့် ရမှာပါ။ ၂၀၀၉ မှာ ကံကောင်းပါစေ။ ပျော်ရွှင်ပါစေ။